bhizinesi nhau 2
Nekuvandudzika kunoitwa mudzimba nekune dzimwe nyika, mhando dzinozivikanwa dzehose macamp mumisika yekune dzimwe nyika dzave kugutsikana, uye kushandiswa kwehose clamp kwakakura kwazvo, kunyanya mhando dzakajairika. Nekudaro, nekusimudzirwa kwetekinoroji, kunyanya mumakore maviri apfuura, misika yemumba yaswedera kune satellite, ichitungamira kumakwikwi anotyisa emusika. Vamwe vagadziri vakatokunda hondo dzemitengo, zvichitungamira kumhirizhonga mumusika wose, izvo zvisina kufanira mukusimudzira kwemaindasitiri yose. Muchokwadi, zviri nyore kunzwisisa mamiriro azvino nekuwongorora mamiriro azvino Chikonzero chemamiriro aya.
Kunyangwe kutanga kwemusika wemahara wemumba kuri nyore, kukura mukati menguva yekupedzisira hakugone kumira. Panyaya yemhando dzakajairika, hapana mukana wekuzevha nezvigadzirwa zvepasi rese. Kunyangwe mutengo wekugadzira wakaderera, uye mukana wemutengo hauna. Iwe unogona chete kuita purofiti zvinoenderana nehuwandu, maererano neyekuvandudza tekinoroji. Iko kuvandudza kwemusika parizvino kunonyanya kukonzerwa nekusimudzirwa kwemukati kiyi tekinoroji, asi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakagara zvisina chinhu, izvo zvisina kukwana kuita zvinodiwa pamusika.
Iyo gap nemusika wepasi rose zvechokwadi yakakura. Kudzokera kumashure kwemaitiro mazhinji kunotungamira kune rakakomberedzwa yekuvandudza tekinoroji, uye zvigadzirwa hazvigone kukwanirisa yakakwira chaiyo inodiwa yezvino michina neinjiniya. Ese mabhizinesi haakwanise kufungidzira, iwo anofanirwa kuvimbisa mhando yepamusoro yezvigadzirwa zvavo, uye havafanirwe kukwikwidza zvine mutsindo kukanganisa misika yezvigadzirwa zvemusika. Kugadzira musika uripo, ivo vanofanirwa kugadzirisa matambudziko akakosha kubva pasainzi uye tekinoroji. Mumamiriro ezvinhu, kusimudzirwa kwesainzi uye tekinoroji kunogona kuita kuti bhizinesi munzvimbo isingawanikwe mukuvandudzika kwazvino. Iko hakuna matambudziko ekurarama, chete vanhu vasina kugona vanobvisa, "hunyanzvi" huchagara huri basa rakasimba remugadziri wedu hose!
Nguva yekutumira: Kubvumbi-10-2020